Sekuphelile obekuhlanganise iChiefs nomdlali wasesiswini | News24
Sekuphelile obekuhlanganise iChiefs nomdlali wasesiswini
Cape Town – IKaizer Chiefs isikhulule umdlali wayo wasesiswini, uLucky Baloyi, njengoba iqhubeka nomkhankaso wayo ‘wokushanela’ ngaphambi kokuba kuqale isizini entsha.
Ngemuva kwamasizini amabili engawini ngisho isicoco esisodwa lesi, Amakhosi asanda kuxosha obengusekela likamqeqeshi, uJohn Pantsil, aphinde akhulula nomgadli wayo obengasenayo inkontileka, uSiphelele Mthembu.
Manje izembe seligadle kumdlali wasesiswini nodle ngokumaka, uBaloyi, esinyathelweni sakamuva, nalapho i-website yeKickOff ibika ukuthi lo mdlali oneminyaka engu-25 ubudala usamukele isivumelwano waphinde wakhululwa ngokusemthethweni yile kilabhu.
Ngemuva kokuqala imidlalo emihlanu nje kuphela ngesizini edlule, phezu kokusayina inkontileka entsha yeminyaka emibili ngoFebhuwari, umphathi kaBaloyi, uJazzman Mahlakgane, uqinisekise lezi zindaba naleli phephabhuku ngoMsombuluko.
Kusukela adlala umdlalo wakhe wokuqala ngqa kumaGlamour Boys eminyakeni emibili eyedlule, uBaloyi udlale imidlalo engu-87 kuPremiership neChiefs waphinde wabolekiswa kwiMoroka Swallows ngesizini ka-2014/15.